को बन्ला कालिकोट कांग्रेसको सभापति ? – Karnalisandesh
को बन्ला कालिकोट कांग्रेसको सभापति ?
प्रकाशित मितिः २६ असार २०७७, शुक्रबार १५:३० July 15, 2020
कालिकोट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पूर्वनिर्धारित समय अर्थात आगामी फागुनमा १४औं महाधिवेशन गर्नेगरी कार्यतालिका संशोधन गरेको छ।
सानेपामा सोमबार (असार २२) बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले १० साउनभित्र अन्तरिम संरचना समायोजन गर्नेगरी कार्यतालिका बनाएको हो।
त्यसपछि बल्ल महाधिवेशन केन्द्रित हुने कांग्रेस बताउछ। संशोधित कार्यतालिका अनुसार एक मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन ०७७ पुस १३ गते सम्पन्न गर्नुपर्ने छ।
कांग्रेसको आन्तरिक चुनावले स्वयं पार्टीलाई मात्रै नभएर आगामी आवधिक निर्वाचनलाई समेत असर गर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउछन्। केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष तथा पार्टी सभापतिमा शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र शेखर कोइरालालगायत अन्य नेताहरुको नाम सुनिन थालेको छ।
यसै क्रममा नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति कालिकोटको सभापति को बन्ला ? यो निक्कै चासोको विषय र प्रश्न हो। कर्णाली सन्देशलाई प्राप्त जानकारी अनुसार कालिकोट कांग्रेसका पुरानादेखि युवा पुस्तासम्मका नेताहरु नेतृत्वको आकांक्षि देखिन्छन्।
जिल्लाका पुराना नेताहरु हिक्मत बिष्ट, कालिबहादुर सहकारीका साथै वर्तमान सभापति हर्षबहादुर बम, अर्का नेता मोतीराम बमलगायतका नेताहरुको नाममा चर्चा चल्न सुरु भएको छ। अहिलेको समय भनेको गतिशील, प्रभावकारी, प्रतिष्पर्धी र समयसापेक्ष ढंगले पार्टीलाई सञ्चालन गर्न सक्ने सभापतिको खोजिमा जुट्ने एक नेता बताउछन्।
उनका अनुसार टेष्टेड नेताभन्दा फ्रेस नेताले पालो पाउनुपर्छ। यसो गर्दा जीवनभर राजनीति भनेर लागेका कार्यकर्ताको भावना समेटिने र अन्य राजनीतिक दलहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सकिनेमा उनी विश्वस्त छन्।
कम्युनिष्टहरुको किल्लाको नामले चिनिएको कालिकोट जिल्लामा कांग्रेसको संगठन खासै प्रभावकारी देखिदैन। आपसमा कुट्ने र फुट्ने इतिहास रचेकेको कांग्रेसले २०७४ सालको निर्वाचनमा भने कम्युनिष्टहरुसँगको जनमतको दुरी छोट्याएको सत्य हो। त्यतिबेला प्रतिनिधि सभाका उम्मेदार भूपेन्द्रजंग शाहीले जनमतको ग्राफलाई घटाउन सफल भएका थिए।
जम्मा जम्मि १० हजार जति मतदाता रहेको कालिकोट कांग्रेसले त्यतिखेर १६ हजारभन्दा बढी मत पाएको थियो। वाम गठबन्धनका प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार दुर्गबहादुर रावतले २१ हजार १ सय ११ मत ल्याउदै गर्दा निकटम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका शाहीले १६ हजार २ सय ८३ मत प्राप्त गरेका थिए।
युवा पुस्तामा लोकप्रिय मानिएका शाहीको प्रभाव प्रतिद्वन्द्वि पार्टीलाई मात्रै नभएर आगामी जिल्ला अधिवेशनमा समेत असर पार्ने देखिन्छन्।
१४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका
संशोधिन कार्यतालिकाअनुसार १० साउनभित्र बाँकी जिल्लाहरूको समायोजन सक्नुपर्नेछ। ५१ जिल्लाको समायोजन सकिएको छ भने २६ जिल्लाको बाँकी छ। यस्तै, क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणका लागि २५ असारबाट सुरु हुनेछ भने साउन मसान्तभित्र सक्ने कार्यतालिका छ।
भदौ मसान्तसम्म यो क्रियाशीलको सूची केन्द्रमा आइपुग्नुपर्छ। त्यसपछि केन्द्रीय छानबिन समितिले उजुरी आह्वान, छानबिनलगायतका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर १५ मंसिरभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ। क्रियाशीलको सबै काम सकिएपछि बल्ल अधिवेशन हुनेछ।
जसको कार्यतालिका यस्तो छः
गाउँ/नगर वडा अधिवेशन २०७७ पुस ६ गते
गाउँ/नगरपालिका अधिवेशन २०७७ पुस ८ गते
प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन २०७७ पुस ११ गते
प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन
एक मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन २०७७ पुस १३ गते
एकभन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन २०७७ पुस १६ गते
प्रदेश अधिवेशन २०७७ माघ ६ गते
केन्द्रीय महाधिवेशन – २०७७ फाल्गुण ७, ८, ९ र १० गते काठमाडौं।
कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको मागपछि कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ। त्यसअनुसार कार्यतालिका संशोधन नगर्ने हो भने महाधिवेशन सार्न खोजेको आरोप लाग्ने भएकाले सभापति देउवा पौडेलको माग अनुसार कार्यतालिका तय गर्न तयार भएका हुन्। कांग्रेसले तोकिएकै समयमा महाधिवेशन गर्न सक्ला ? यसका बारेमा थाह पाउन भने समय कुर्नै पर्छ।